Qodobbada Salaadda ee Khiyaanada Khiyaanada ah | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Salaadda Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Khiyaanada
Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Khiyaanada
Maanta waxaan la macaamili doonnaa qodobbada salaadda ee ka dhanka ah khiyaanada. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato macnaha khayaanada intaanan usocon. Khiyaano waxaa lagu qeexaa ficil ah in qof loo gacangeliyo gacanta cadowga iyada oo loo marayo qaab khiyaano ah. Tilmaamahan cinwaankiisu yahay qodobbada salaadda ee ka dhanka ah khiyaanada waxaa loo qeybin doonaa labo, oo ah: Salaadda ka dhanka ah khiyaanada iyo Duco la yiraahdo markii lagu khiyaaneeyo. Sababta ayaa ah in qof walba la khiyaanayn karo, qof walbana uu khiyaanayn karo qofna sidoo kale. In kasta oo ay muhiim tahay in aan ka barinno khiyaanada, haddana waxaa sidoo kale muhiim ah in aan ka barinno in Ilaah inagu siiyo nimcada inaan la khiyaanayn dadka kale ee naloo aaminay noloshooda.
Dad badan uma arkaan Yuudas Iskariyod inuu yahay Rasuul maxaa yeelay wuxuu khiyaaneeyey Ciise Masiix. In kasta oo aysan ahayn ujeeddada Yuudas Iskariyod inuu Ciise bilowgii gacangeliyo, laakiin khadka dhexdiisa, Ibliisku wuxuu awooday inuu ku tijaabiyo lacag si uu ugu gacangeliyo Ciise Masiix. Taasi waa sababta aan ugu ducayn karno ruuxa khiyaanada ee laga yaabo inuu rabo inuu ku yimaado dadka kale ee aan jecel nahay ama annaga. Sidoo kale, waxaan u ducaynaynaa kuwa la khiyaaneeyey.
Qofna ma jecla in la khiyaaneeyo, gaar ahaan dadka ay aadka u jecel yihiin oo ay aaminaan. Laakiin waa maxay khiyaanadu? Haddii aysan ka imaan dadka aan jecel nahay ee aan daryeeleyno. Ilaah oo keliya ayaa fahmi karay fikirka ku dhacayay maskaxda Yuusuf markii walaalihiis khiyaaneeyeen. Xanuunka iyo xanuunka leh khiyaanada ayaa ku filan in gabi ahaanba la burburiyo qof kasta. Waxaan ku baryayaa awoodda jannada; laguma gacangelin doono magaca Ciise. Iyo awooda jannada, ma khiyaanayn doontid kalsoonida ay dadku kugu hayaan magaca Ciise.
Waxaa kale oo suuragal ah in rag Ilaahay khiyaaneeyo. Waxaan qiyaameynaa Ilaah annaga oo aan la xisaabtamin meel ay tahay inaan kula xisaabtano Ilaahay. Waxaan ku baryayaa naxariista kan ugu sarreeya, laguma heli doono inaad doonaysid meeshii lagaa rabay inaad u istaagto Masiixa magaca Ciise. Markaad baraneyso tilmaamahan salaadda, waxaad ku arki doontaa saameyn muuqata noloshaada magaca Ciise.
Qodobbada Salaadda ee Khiyaanada Khiyaanada:
Aabbaha Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad ku buuxiso.Ruuxaaga Quduuska ah iyo Awoodaada, i sii nimcada aan kula dulqaato dhibaatada. Aabbe, ma doonayo inaan ku gacangeliyo sida uu Yuudas Iskariyod u galay Ciise Masiix. Ma doonayo inaan kuu diido sida Rasuul Butros u beeniyey markii aad cadaab la kulantay. Rabbiyow, isii nimcada aan kula garab istaago ilaa dhamaadka magaca Ciise.
Rabbi Ciise, waxaan ka soo horjeedaa dareen kasta oo khiyaano ah oo maskaxdayda ku jirta. Waxaan Ilaah uga baryayaa inuu dabka Ruuxa Quduuska ahi ku baabi'iyo dareenkaas qalbigayga ku jira magaca Ciise. Rabbiyow, khiyaano waddankeyga ah, ayaan ku imid anigoo dhiigga wanka baranaya. Eraygaagu wuxuu inagu waaninayaa inaan sii wadno inaan u duceyno wanaaga Yeruusaalem in kuwa jecel ay barwaaqoobaan. Rabbiyow, waxaan rabaa marwalba inaan raadsado nabadda ummaddayda. Waxaan ku baryayaa inaad i siiso nimcada inaan aamin noqdo.
Aabbow Sayidow, xiriirkeyga, waxaan kaga soo horjeedaa nooc kasta oo khiyaano ah oo qalbigayga ku jirta. Sida aad Rabbi uxiratay xiriirkan, waxaan kaaga baryayaa inaad iga caawiso inaan aamin ku ahaado magaca Ciise.
Aabbo Sayidow, guurkeyga, waxaan uga soo horjeedaa khiyaanada magaca Ciise. Waxaan fahansanahay in guurku yahay hay'ad ilaahay aasaasay. Taasi waa sababta Qorniinku u yidhi, sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa guriga aabbihiis iyo hooyadiis, wuxuuna la joogayaa naagtiisa, oo labaduba waxay noqonayaan isku jidh. Sayidow, wax kasta oo doonaya inay noloshayda ku soo dhex rogmaan oo igu kalifaya inaan khiyaaneeyo nidarradaydii guur, waxaan ku baabi'inayaa jinniyo noocaas ah magaca Ciise.
Aabbe, waxaan ka baryayaa in dabka Ruuxa Quduuska ahi uu ku soo dego abeeso kasta oo khiyaano ah oo noloshayda loo soo diray si ay iiga dhacdo, dabku jannada ha ku baabbi'iyo abeesooyinkaas oo kale magaca Ciise.
Dhibcaha Salaadda ee Khiyaanada Maskaxda:
Aabbo Sayidow, maanta waan ku hor imid maxaa yeelay waxaa i khiyaaneeyey qof aan jeclahay oo aan aad ugu kalsoonahay. Wadnahaygu wuu qulqulayaa xanuun daran. Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad igu bogsato magaca Ciise. Rabbi Ciise, sidaan ugu sii dhaqaaqayo nolosha, waxaan ku baryayaa inaad iga caawiso inaan iloobo xanuunka iyo murugada waagii hore oo aad iga caawiso inaan xusuusto casharradii ka soo baxay. Waxaan kaa baryayaa inaad qalbigayga igu hanujiso inaanan ciqaabin dadka kale ee noloshayda ku soo dhaca khiyaanada aan la kulmay awgeed.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad ka caawiso inaad dadka weli aaminto, i siiso dhiirranaan aan markasta u jeclaado dadka noloshayda. Waxaan diyaar u ahay inaan badalo dhibta maskaxdayda ku jirta si nabad loo helo. Waxaan kaa baryayaa inaad isiiso nabadaada. Qorniinku wuxuu leeyahay nabaddayda waxaan idin siiyey, ma aha sida dunidu idin siiso. Aabbe, maskaxdaydu ha nabad ka hesho xaqiiqda ah inaad aad ii jeceshahay, ii oggolow inaan helo hankayga iyo karaamdayda inaad ii hayso qorshe ka fiican aniga maxaa yeelay Qorniinka ayaa i ogeysiiyay inaad ogtahay fikradaha aad aniga igu qabo, waa fikradaha wanaagga iyo xumaanta in ay isiiyaan dhammaad la filayo. Sayidow, xanuunkayga iyo cidhiidhiga waan kuu rogay; iga caawi sidii aan u daryeeli lahaa.
Rabbi Ciise, waan kuugu mahadnaqayaa inaad i siisay nimcada si aad u eegto meel ka baxsan nabarradii maskaxdayda ku dhacday khiyaanada dadka aan aad u jeclahay. Waad ku mahadsantahay geesinimada aad isiisay si aan ugu sii socdo nolosha, magacaaga ha lagu weyneeyo magaca Ciise.
salaadda ka dhanka ah khiyaanada
article PreviousQodobbada Salaadda ee Ka Soo Horjeeda Qoynta Sariirta
Next articleQodobbada Salaadda ee ka dhanka ah sixirka
Ducada Degdega ah ee Bogsiinta
Ducada Guusha 2021
Qodobbada Salaadda ee xoogga leh ee lagu daweeyo Kansarka